Wararkii ugu dambeyey ee Xaaladda Baladweyne – Radio Daljir
Juunyo 15, 2019 8:43 b 0
Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraale ayaa shaaca ka qaaday in xaaladda guud ee magaalada Beledweyne ay tahay mid degan, isla makaana ay ku guuleysteen in xubno lagu tuhmayo inay ka dambeeyeen falkii ka dhacay Beledweyne gacanta lagu dhigay, loona taxaabay xabsiga dhexe.
Guddoomiyaha oo wareysi gaar ah siiyay Warbaahinta dowladda ayaa sheegay si horu dhac ah xabsiga loo taxaabay rag lala xiriirinayo inay ka dambeeyeen weerarkii ka dhacay Beledweyne, ayna socoto baaritaanada la xiriirta kiiskaasi.
“Allaha u naxariisto taliyihii qeybta Gobalka Hiiraan shalay ayaan aasnay, aas qaran ayaan u sameynay, waxaan ku guuleysanay inaan qabanayo dambiilayaashii falka dilka ah geystay iyo kuwii amarka fuliyay”ayuu yiri Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan.
Mudane Cali Maxamed Caraale ayaa sheegay in Guddiigii uu magacaabay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu guddoomiye u yahay Sareeye Guud Bashiir Maxamed Jaamac Taliyaha Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed ay ku wajahanyihiin magaalada Beledweyne, si ay u dhameystiraan baaritaanka shaqaaqadii ka dhacday Beledweyne ee lagu dilay Taliyihii qeybta booliska Gobolka Hiiraan Gaashaanle dhexe Maxamed Macow Xalane.
Muuse Biixi oo ka hadlay xaalada gobolada Sool iyo Sanaag (dhegayso)